Dhammaan wararka ku jira macOS Monterey 12.1, macOS Catalina iyo macOS Big Sur 11.6.2 | waxaan ka imid mac
Dhammaan wararka ku jira macOS Monterey 12.1, macOS Catalina iyo macOS Big Sur 11.6.2
Dhowr saacadood ka hor shirkadda Cupertino ayaa bilowday Noocyada ugu dambeeya ee macOS Monterey 12.1, macOS Catalina 10.15.7, iyo macOS Big Sur 11.6.2 ee dhammaan isticmaalayaasha. Xaaladdan oo kale, nooca rasmiga ah ee macOS Monterey wuxuu ku darayaa isbeddelo badan iyo warar aan hadda ku arki doonno shabakadda oo burburay, beddelkeeda noocyadii ugu dambeeyay ee macOS Catalina 10.15.7 iyo macOS Big Sur 11.6.2 warka ayaa si toos ah diiradda loogu saarayaa. dhanka amniga iyo xasiloonida nidaamka. Waxaan dhihi karnaa inay yihiin noocyo si toos ah u wanaajiya guul-darrooyinka ama cilladaha amniga ee la ogaaday.
1 Hubi in Mac-gaagu ku habboon yahay Monterey
2 Markaa waxaan u cusbooneysiin karnaa macOS Monterey 12.1
2.1 Kutaanku wuxuu hagaajiyaa nooca ugu dambeeya ee macOS Monterey 12.1
3 SharePlay ugu dambeyntii waxay ku timaadaa Macs
4 Dhaxalka dhijitaalka ah ee aqoonsiga Apple
5 Siri's Apple Music Voice
6 Hagaajinta abka Sawirada
7 Barnaamijka Apple TV
8 Noocyada cusub ee macOS Catalina 10.15.7 iyo macOS Big Sur 11.6.2
Hubi in Mac-gaagu ku habboon yahay Monterey
Sida iska cad, haddii aad hore u haysatey noocii ugu dambeeyey ee la heli karo, muhiim maaha in la hubiyo in qalabku uu la socon karo noocaan. Si kastaba ha ahaatee tani waa tan List of Mac socon version ugu dambeeyay Aad bay u ballaaran tahay waxayna kala yihiin kuwan:
iMac - Dabayaaqadii 2015 iyo kadib
Mac Pro - Dabayaaqadii 2013 iyo kadib
iMac Pro - 2017 iyo kadib
Mac mini- Dabayaaqadii 2014 iyo kadib
MacBook Air - Horaantii 2015 iyo kadib
MacBook- Horaantii 2016 iyo kadib
MacBook Pro - Horaantii 2015 iyo kadib
Markaa waxaan u cusbooneysiin karnaa macOS Monterey 12.1
Waxa ugu horreeya ayaa ah in qof kastaa aanu haysan noocyada beta ee lagu rakibay Mac-yadooda si aad u rakibto noocaan Looma baahna in dib loo soo celiyo qalabka ama laga soo bilaabo eber. Haddii aad haysato nooc hore sida macOS Mojave ama ka dib, waxaad kala soo bixi kartaa macOS Monterey nooceedii ugu dambeeyay iyada oo loo marayo Cusboonaysiinta Software: ka dooro menu Apple xagga sare ee menu> Xulashada Nidaamka oo guji Cusboonaysiinta Software.
Inta aanad dhibaato ku qabin, waxaad ku rakibi kartaa nooca cusub dushiisa midkii hore, aynu samayno. Waxa ugu horreeyana waa inaad si toos ah u aaddo tab Xulashada Nidaamka> Guji ikhtiyaarka cusboonaysiinta softiweerka oo aqbal. Halkaa marka ay marayso waa in taasi caddahay Waxay qaadan doontaa wakhti in kooxdeena ay ku rakibto nooca cusub, oo dib ayay u bilaaban doontaa, markaa waa in la sameeyaa wakhti aan loo baahnayn in aan la shaqeyno. Marka nooca cusub la rakibo, waxaan hadda ku raaxaysan karnaa warka noocaan.
Kutaanku wuxuu hagaajiyaa nooca ugu dambeeya ee macOS Monterey 12.1
Ka dib oo dhan, waa wax caadi ah in qaar ka mid ah dhiqlaha ama dhibaatooyinka lagu ogaaday qoraaladii hore la saxo kiiskan sidoo kale waa kiiska. Waxaan ku akhrin karnaa qoraalada nooca cusub ee la sii daayay taas Apple waxay xallisaa dhibaatooyin taxane ah oo la ogaaday.
Desktop-ka iyo shaashadaha ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan maran ka dib markii laga doorto sawirada maktabadda sawirka
Wuxuu hagaajiyaa arrin ku socota trackpad-ka kaas oo joojin kara ka jawaabista qasabadaha
Ku hagaaji cilad-ku-soo-celinta muuqaalka HDR ee YouTube-ka
Waxay ka hortagtaa liiska codsiyada ama aaladaha dheeriga ah in lagu qariyo gadaasha cirifka
Waxay hagaajisaa cayayaanka MagSafe ku dallacaadda 2021 16-inch MacBook Pros marka daboolku xiran yahay
Hagaajinta kutaannada kale
SharePlay ugu dambeyntii waxay ku timaadaa Macs
Noocan cusub wuxuu ku darayaa ikhtiyaarka aan kula wadaagno qoyska iyo asxaabta khibradaheena iyada oo loo marayo FaceTime. Shaqadan waxaa damiyay Apple oo ah nooca beta ee macOS Monterey laakiin markii dambe waxay timid inay sii joogto sida ay ku dhawaaqeen WWDC 2021. Shaqada SharePlay waa shaqo taas Waxay noo oggolaanaysaa inaan la wadaagno waxyaabaha ku jira madal fiidyow qulqul leh iyada oo loo marayo FaceTime.
Apple TV +, HBO, Disney +, Apple Music, TikTok iyo codsiyada kale ee ku habboon waa qaar ka mid ah dhufto ee bixiya waafaqid this feature cusub in hadda la heli karo. Netflix iyo YouTube, oo ah laba ka mid ah kuwa ugu muhiimsan, ayaa wakhtigan go'aansaday inay ka gudbaan shaqadan.
Waxa aan samayn karno waa in aan si toos ah ula wadaagno khibradayada isticmaalayaasha kale marka aan daawaneyno taxane, filim ama wax la mid ah mid ka mid ah adeegyadan. Furaha adeeggan waa la wadaaga waxa ku jira dadka kale iyo ku raaxayso isku mar iyada oo aan loo eegin meesha aan joogno. Koontaroolada waxaa ka dhexeeya isticmaalayaashan si mid ka mid ah uu u hakiyo, u ciyaaro, u soo celiyo ama si degdeg ah ugu gudbiyo macluumaadka la wadaago.
Dhaxalka dhijitaalka ah ee aqoonsiga Apple
Aynu rajayno inaynaan isticmaalin doorashadan lagu daray nooca cusub ee macOS Monterey 12.1 iyo inta kale ee nidaamyada hawlgalka Apple, laakiin waxay ahayd wax runtii lagama maarmaan ah in la hirgeliyo. Tani waa "nooc dardaaran ah" oo ay ka tageen isticmaalayaasha aqoonsiga Apple si kuwa aan u qoondeyno ay xaq u leeyihiin inay galaan xisaabaadka iCloud iyo xogta kale ee shakhsi ahaaneed haddii ay dhacdo geeri.
Habkan waxaa si aad u wanaagsan u helay bulshada isticmaala Apple sida hadda si fudud innagoo ka tagayna this "dhaxalka digital" aan awoodno U dooro qof kasta inuu galo macluumaadka iyo xogta aqoonsiga Apple. Doorashadani waxay sidoo kale noo ogolaanaysaa inaan doorano dadka la aamini karo inay yihiin xiriirada soo kabashada akoontada si ay nooga caawiyaan dib u habeynta erayga sirta ah oo aan dib u helno marka aan u baahanahay.
Siri's Apple Music Voice
Xaaladdan oo kale, waa qorshe isdiiwaangelinta adeegga Apple Music, liisaska heesaha iyo inta kale ee saldhigyada ay Apple siiso isticmaalkeeda. Tani waa qaybta "Kaliya weydii Siri" wuxuu soo jeedinayaa heeso ku salaysan taariikhdaada ciyaarista, iyo waxaad jeceshahay ama neceb tahay.
Qorshahan Apple Music Voice Waxay siisaa macaamiisha marin u helka adeegga 90 milyan ee buug-gacmeedka heesaha, tobanaan kun oo liis-ciyaareed ah, oo wata boqollaal liis-ciyaareed cusub hawl kasta ama niyadda, isku-dhafka caadada ah iyo saldhigyada noocyada muusigga ee kala duwan, iyo sidoo kale adeegga caanka ah ee Apple Music Radio.Dhammaan waxaa laga heli karaa Siri iyo € 4,99 bishii.
Hagaajinta abka Sawirada
Nooca ugu dambeeyay ee macOS Monterey wuxuu siinayaa isticmaalayaasha a hab cusub oo lagu arko xusuusta, oo leh is-dhexgal is-dhexgal ah oo la wanaajiyey, animations cusub iyo qaabab kala-guurka oo kala duwan si aad ugu raaxaysato noocyo kala duwan oo isku-duubni ah oo la hagaajiyay. Tani waa mid ka mid ah qaybaha aan aadka u jecelnahay ee ku saabsan iOS iyo in hadda macOS Monterey sidoo kale waa mid aad loogu riyaaqo.
Sidoo kale sida cusub oo kale ee hagaajinta codsiga Sawirada, saxiixa ku dar nooca cusub waxyaabaha xusuusta ah oo ay ku jiraan fasaxyada caalamiga ah, xusuusta carruurta-xuddunka ah, isbeddellada wakhtiga ama xusuusta xayawaanka oo aad u dabeecad badan oo la xoojiyay.
Barnaamijka Apple TV
Tabaha cusub ee aanu hadda haysano waxa uu noo ogolaanayaa in aanu baadhno, iibsano oo kiraysano filimada iyo bandhigyada TV-ga oo dhan hal meel. Doorashadani waxay runtii faa'iido u leedahay kuwa isticmaala adeeggan nuxurka qulqulka wax badan waana taas wadajir dhammaan fursadaha jira si loo fududeeyo hawsha goobidda.
Intaa waxaa dheer, nooca cusub wuxuu sidoo kale ku darayaa hagaajinta soo socota:
Habka "Qari iimaylkayga", oo laga heli karo app Mail haddii aad leedahay iCloud + rukunid firfircoon, waxay abuurtaa cinwaanno iimaylo ah oo aan kala sooc lahayn oo gaar ah.
Appka Stock wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto lacagta koodka saamiyada iyo faa'iidada YTD markaad la tashanayso garaafyada
Hadda waxaad dib u magacaabi kartaa ama ka saari kartaa summada ku jira abka Xusuus-qorka iyo Xusuus-qorka
Noocyo cusub oo ah MacOS Catalina 10.15.7 iyo macOS Big Sur 11.6.2
Xaaladdan oo kale versions of MacOS Catalina 10.15.7 iyo macOS Big Sur 11.6.2 shirkadu waxay ku daraysaa sifooyin cusub oo amniga iyo xasiloonida nidaamka ah. Xagga Apple waxay nagugula talinayaan inaan u cusboonaysiino qalabkayaga nooca ugu dambeeya ee la heli karo si aan u helno horumarinnadan qalabkayaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Monterey » Dhammaan wararka ku jira macOS Monterey 12.1, macOS Catalina iyo macOS Big Sur 11.6.2
27-inch iMac Pro wuxuu bilaabi karaa guga soo socda
Ka fur fayl kasta Unarchiver One